China OEM 3D Eyelashes Mink Lashes Handmade Makeup Full Strip Lashes mveliso kunye nabenzi | Weiti
I-OEM 3D Eyelashes Mink Lashes Handmade Makeup Full Strip Lashes
1, DOLORES isitayile semivimbo yendalo
2, 14mm 100% iinwele ze-mink yokwenene
I-3, ileyibheli eyenzelwe wena yangasese yebhokisi yokupakisha
I-4, isitokhwe esikhulu esilungele kunye nokuthumela ngexesha
1, Iqela eliNqamlezileyo leNdalo kunye neeleki ezininzi:Nganye yeeyelashes zethu zeemink zenziwe ngesandla. Inesiphumo esigqibeleleyo sokuhombisa, eqaqambileyo ebengezelayo, kwaye iyakhazimla. Inokucheba emaphethelweni, yenza ubukhazikhazi obuhle. Ilungele ukunxiba mihla le, ifoto yomnyhadala.
2, I-Mink Fur yasimahla yePremiyamu:I-eyelash yethu ayinaburhabaxa, eyenziwe ngoboya be-mink yaseSiberia, evela kwimisila yeenwele zendalo ezizalisayo. Emva koko zacocwa kwaye zidaywa ngaphambi kokuba zipakishwe. Okwangoku, qhawula imivimbo ye-mink uzive ukhululekile kunemivimbo eyenziweyo. Indalo ethambileyo, egobileyo, i-hypoallergenic, njengemivumbo yendalo yomntu, kwaye akukho kucaphukisa emehlweni akho.
3, Ibhendi yeCotton ethambileyo eyenziwe ngesandla:Umgca omnyama omdaka wenza ukuba amehlo akho abukeke ngathi anefuthe le-eyeliner, lihle ngakumbi kwaye linomtsalane. Unokuphinda usetyenziswe ngaphezulu kwamaxesha angama-20-25 ngononophelo olufanelekileyo. Akululanga ukuwa kunye nomtya ohleli ixesha elide.
4, Ubunzima bokuKhanya- Akukho luvo:Isibini ngasinye se-mink eyelashes ubunzima be-0.5 yeegram kuphela. Imithwalo elula "0", akukho mvakalelo inzima. Ke awunakubuva ubunzima bayo, xa uyinxibile. Kwangelo xesha, kukhuselekile kwaye kunobuhlobo ngamehlo abuthathaka okanye umntu onxibe iilensi.
Egqithileyo Intengiso eshushu ye-3D Mink Eyelashes ethengisa iipesenti ezili-100 zeSiberian Mink Lashes
Okulandelayo: I-Factory Bulk Mink Eyelashes Umthengisi we-3D Lashes ngeBhokisi yeeleyibhile zaBucala
I-3D yendalo eyi-100% yeMink Eyelashes
Mink eyelash yobuxoki
I-Las Vegas epheleleyo
I-liner yamehlo, Abathengisi bee-Eyelash, Imivimbo yamehlo, eyeliner, Imivimbo ye-mink, Izandiso zeEyelash,